Felipe Luna ကရစ်ဘီယံများအတွက်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်လက်တင်အမေရိကန်ဒေသကြီးအဖြစ် GatesAir ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် - 2019 NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိသည်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် 2019 NAB ပြရန်သတင်းများ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ: NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် 2019 NAB ပြရန်သတင်းထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်။ Show ကို 2019 NAB ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Anhui တီဗီမတ်မတ် Blackmagic ဒီဇိုင်းရဲ့ 4G-SDI လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူ၎င်း၏ပထမဦးစွာ 12KOB ဗန်
Blackmagic ဒီဇိုင်းသုံး iF ဒီဇိုင်းဆုပေးပွဲ 2019 ဆွတ်ခူး
ပိုလနျတီဗီန်ဆောင်မှုအပေါ်ပွဲဦးထွက်စေ TOYA နှင့်အတူမေး Polska မိတ်ဖက်
GB ကို Labs က NAB 2019 မှာမောရှေပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းကဆော့ဖ်ဝဲကိုမိတ်ဆက်
MediaKind NAB ပြရန် 2019 မှာယင်း၏ဠာအစုစု၏ပွဲဦးထွက်နှင့်အတူတီဗီ၏ခေတ်သစ်ကြိုဆို
NVP မြက်ချိုင့်ထဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်အတူ 4K UHD နှင့် HDR များအတွက် OB ရေယာဉ်စုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
V-Nova NAB 2019 မှာမီဒီယာအခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီး Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Compression ကို၏စစ်မှန်သောပါဝါကိုရည်ညွှန်းပြသ
Globecast ဆိုမျက်နှာပြင်မှမဆိုဖြစ်ရပ်ရောက်စေဖို့ Globecast တိုက်ရိုက်ကြေငြာလိုက်သည်
10 အရာတိုင်းသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မောင်းသည့်အပိုင်း 107 စာမေးပွဲအကြောင်းကိုသိရှိရမည်
ပလက်တီနမ်Tools® 45 NAB Show မှာ MapMaster ™ mini ကို RJ2019 Pocket Cable ကိုစမ်းသပ်လွှတ်တင်
နောက်ဆုံးပေါ် Veritone aiWARE မြှင့်တင် AI အများ၏သူတို့ရဲ့မွေးစားခြင်း Expand နှင့်အရှိန်မြှင့်မှ Customer များ Enable
အကယ်ဒမီAward®အသံအယ်ဒီတာများကီလီဗန်နှင့်အင်ဒရူး DeCristofaro Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများကို Join ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး
Deluxe data-Driven မဟာဗျူဟာချမှတ်အောင်မြင်စွာမိုဃ်းတိမ်, သြဇာအချက်အလက်ရွှေ့ပြောင်းရန်ပုံဖော်ပြထားပါတယ်
မီဒီယာ Links များ NAB4မှာကွန်ယက် Edge မှာ 2019K / UHD Bandwidth ကိစ္စများအမှာစကားပြောကြား
Home » သတင်း » Felipe Luna ကရစ်ဘီယံများအတွက်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်လက်တင်အမေရိကန်ဒေသကြီးအဖြစ် GatesAir ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Felipe Luna ကရစ်ဘီယံများအတွက်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်လက်တင်အမေရိကန်ဒေသကြီးအဖြစ် GatesAir ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
အဆိုပါ GatesAir အဖွဲ့ဝါရင့်အရောင်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ပြန်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် IP အသွင်ကူးပြောင်းမှုဒေသ-ကျယ်ပြန့်ဖွင့်အပူအဖြစ်
Cincinnati, ဇန်နဝါရီလ 16, 2019 - GatesAirကြိုးမဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, Over-the-air ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ, ကာရစ်ဘီယံများအတွက်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်လက်တင်အမေရိကန် (Cala) ဒေသအဖြစ် Felipe Luna ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ Rich Redmond, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ, International ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် Luna ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်ဝေစုများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မြင်သာတိုးမြှင့်ဖို့အားလုံးရောင်းအားနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစပျိုးစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ Luna လည်း GatesAir ရဲ့ကျယ်ပြန့် In-ဒေသရောင်းအားအသင်းနှင့်မိတ်ဖက်ကွန်ယက်ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမည်ဖြစ်သည်။
Luna Harris ကထုတ်လွှင့်အဘို့ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး GatesAir မွေးဖွားခဲ့သည်ရာကနေကုမ္ပဏီအဖြစ် 12 နှစ်ကြာပြီးမှ, ဒေသတွင်းလျှောက်လုံး GatesAir ဖောက်သည်များနှင့်ထုတ်လွှင့်မယ့်အကျွမ်းတဝင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Luna သူသည်သူ၏ပထမဆုံးသက်တမ်းကာလအတွင်းကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်အများအပြားဘယ်သူကို၏သက်တမ်းကြာ GatesAir / Harris ကဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုသည်။ သူလည်းအသစ်သော customersnavigating မှဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် IP ကိုအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏စိန်ခေါ်မှုများ GatesAir မိတ်ဆက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။
"နိုင်ငံအများအပြားပဲသူတို့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်တီဗီအသွင်ကူးပြောင်းမှုစတင်နေကြသည်အဖြစ် Cala, ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပြောင်းလဲနေသောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စျေးကွက်ဖြစ်နေဆဲ," Luna ကဆိုသည်။ "High-ထိရောက်မှုဂီယာအတွက် GatesAir ၏စျေးကွက်-ဦးဆောင်တီထွင်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျနော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်နိမ့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူယနေ့အကြီးမားဆုံး Over-the-air ကွန်ရက်များအချို့ပါဝါဘယ်မှာ Cala အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သောအောင်မြင်မှုများအတွက်ကုမ္ပဏီနေရာချ။ အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်ဒေသတွင်းလျှောက်လုံးဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ကိုများကိုချဲ့ထွင်ခြင်း, Over-the-air ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီနှင့်ရေဒီယိုဖောက်သည်အသစ်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးကြောင်းဖြေရှင်းချက် turnkey ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဖြစ်၏။ "
Luna ကသူ၏အခန်းကဏ္ဍသစ်မှနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဝိညာဉ်၏ရှားပါးရောနှောတတ်၏။ သူကထုတ်လွှင့်, ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Broadband စျေးကွက်များတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ရောင်းချသူကိုယ်စားပြုကြိုတင် 2002 အတွက် Harris ကထုတ်လွှင့်ဝင်ရောက် Eletro Equipment တယ်လီကွန်းနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုနှင့်အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်ခြောက်နှစ်နေခဲ့ရသည်။ မိမိအတာဝန်များကို Over-the-air နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချမှု, အတိုင်ပင်ခံနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင်န်ဆောင်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူ PayTVsystems များအတွက်နည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆိုပြုချက်လည်းပါဝင်သည်။
Luna ကတည်းကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ဘရာဇီးရဲ့အကြီးဆုံးစားသောက်ဆိုင်စီးပွားရေး, ခိုခို Bambu အပါအဝင်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပြင်ပမိတ်ဖက်အခန်းကဏ္ဍ, စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ သူမိုင်ယာမီမှပြောင်းရွှေ့နောက်ပိုင်းတွင်သူလေးတိုက်ကြီးနှင့်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ဝင်ငွေကိုဖြတ်ပြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ရှိရာလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ် Hayman Woodward ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
"Felipe ပြောင်းလဲနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်အသစ်များဈေးကွက်နိဒါနျးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖန်တီးခြင်းအတွက်အားကြီးသောတွင် track record နှင့်အတူ, သူ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍဖြတ်ပြီးမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေပါတယ်" ဟု Redmond ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကိုပြန်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးအပေါ်သူ၏စက်မှုလုပ်ငန်းအသိပညာ, အရောင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလေးပေး GatesAir ကာရစ်ဘီယံနှင့်လက်တင်အမေရိကတစ်လျှောက်လုံးက၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာအရှိန်အဟုန်အပေါ်တိုးချဲ့ကူညီကြမည်ရှိရာ GatesAir မိသားစုမှ Felipe ကြိုဆိုကံကောင်းပါ။ "
GatesAir, Inc က The ခွေ့ Group ၏တစ်အစုစုကုမ္ပဏီ, Multichannel များအတွက်မစ်ရှင်-အရေးပါန်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးမဲ့ spectrum ကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, Over-the-air ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်မှုအတွက်ပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ နီးပါး 100 နှစ်ပေါင်းမတူနိုင်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Over-the-air ကွန်ရက်များ Powering, GatesAir ရဲ့ turnkey ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ transmit လုပ်ဖို့ထုတ်လွှင့် enable ။ 185 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်တကွ, ကုမ္ပဏီ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းထိုးဖောက်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်စုဝေးအားလုံးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ။ အလည်အပတ် www.gatesair.com Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များများအတွက် www.facebook.com/gatesair, နှင့် Twitter မှာကိုလိုကျနာ @GatesAir.
အဆိုပါဂိုး Group မှအကြောင်း
အဲလက်ခ်ဂိုးအားဖြင့် 1987 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဂိုးအုပ်စု, ကုမ္ပဏီ၏ operating အတွေ့အကြုံနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြို့တော်အခြေစိုက်စခန်းထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျရာရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိန်းချုပ်အကျိုးစီးပွားလေးလည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဝါရင့် M & ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးဝယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူမဟာဗျူဟာဝယ်များ၏အသေးစိတ်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယစွမ်းရည်ပေါင်းစပ်။ ယင်း၏ 30 နှစ်သမိုင်းကျော်က The ခွေ့ Group မှစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ၎င်း၏အစုစုကုမ္ပဏီတန်ဖိုးကိုအတွက်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောတွင် track record သရုပ်ပြပြီးလျှင်တစ်ဦးကိုဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာသည်။ ရုံးချုပ် Los Angeles မြို့က The ခွေ့ Group မှကျောက်သား, CO နှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိရုံးခန်းများထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.gores.com.
ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် GatesAir ချိန်းဆိုချားလ်စ် Sotto - မတ်လ 13, 2019
WXPN Syndication တိုက်ရိုက်, uncompressed, StreamGuys နှင့် Barix ကနေ IP ကို-အခြေပြု Delivery Service ကိုအတူ XPoNential ရေဒီယို - မတ်လ 13, 2019
Dielectric တင်းငလျင် Code ကိုအတူလေးစားလိုက်နာခြင်းအတွက် Sutro မျှော်စင် Repack စီမံကိန်းများအတွက် VHF အင်တင်နာ System ကို Designs - မတ်လ 13, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-01-16
ယခင်: Barix ISE 2019 မှာအစွမ်းထက် Multi-ဆိုက်ကိုနောက်ခံဂီတလွှမြှင့်တင်စတင်ခြင်း
နောက်တစ်ခု: Argosy ISE 2019 မှ AV စနစ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စမတ်နေအိမ်များများအတွက်အသိဉာဏ်ပါဝါစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်မစ်ရှင်-အရေးပါ cabling ဆောင်တတ်၏
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မတ်လ 2019 (370) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဧပြီလ6- ဧပြီလ 11
အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ - တံဆိပ်တပ်စတူဒီယို
အငယ်တန်း Interactive မှ / Motion ဒီဇိုင်နာ
နွေရာသီ 2019 - ဆက်သွယ်ရေး International (Paid)
Editor ကို / ထုတ်လုပ်ခြင်းလက်ထောက်
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း / ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင့်ထုတ်ရန်ထုတ်လုပ်မှုအထူးကု
Fox ကအားကစားနဲ့ Big ဆယ်ပါးကွန်ယက် International (ချီကာဂို) - နွေရာသီ 2019
UX ကိုဒီဇိုင်နာ (VA သို့ဒေသခံဖြစ်သင့်သ)
Repack ငွေကြေးပြန်လည်မိန့်၏ FCC သည်အတည်ပြုချက်အပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် NAB
NAB ပြရန်နှင့် Citizine 2019 ခရီးသွားဗီဒီယိုဆုကိုဆန်ခါတင်ကြေညာ
2020 အသံလွှင့်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအစီအစဉ်အဘို့အ NABEF လက်ခံခြင်း Applications ကို
NAB 2019 ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုလက်ခံသူကြေညာ
#GALSNGEAR 2019 NAB ပြရန်အဘို့အ Programming ကြေညာ
နယူးအင်္ဂါရပ်မှ NAB Show ကိုနယူးပြကွက်ဧရိယာနှင့်အတူ '' In-ယာဉ်အတွေ့အကြုံ 'ပင်မအဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
NAB 2019 အင်ဂျင်နီယာအောင်မြင်မှုဆုပေးပွဲကြေညာ
NAB ပြရန် 2020 များအတွက်နေ့စွဲများကြေညာ
ပြည်တွင်းရေဒီယိုလွတ်မြောက်ရေးအက်ဥပဒေ Cosponsors အဖြစ်ဆယ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အမတ်များ Added
2019 NAB ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကဋ္ဌရဲ့ Award ဆုလက်ခံမှသူဟာ Emmy Winner Sterling K. ဘရောင်း
NAB Show ကိုနယူး '' အီလက်ထရောနစ်အားကစားအတွေ့အကြုံ '' အင်္ဂါရပ်မှ
SPROCKIT အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာပါဝင်ပတ်သက် startup ၏ပထမဦးဆုံးက Round ကြေညာ
သက်တမ်းကြာကွန်ဂရက် John D. Dingell ဂျူနီယာ၏ဂုဏ်အတွက် NABEF တည်ထောင်ရန်ဆုချီးမြှင့်